Amakhasino amahle kakhulu aku-inthanethi anemali yangempela | UK 2021 ✅
Home » Amakhasino aku-inthanethi
Izindlela okufanele zifakwe kuhlu eCasinoble
Amakhasino abukhoma abukeziwe
Odinga ukukwazi ngamakhasino aku-inthanethi
Ukuze uthole okungcono kakhulu phila amakhasino ukuzwa kubaluleke kakhulu ukukhetha okuhle, okulungile enokwethenjelwa amakhasino aku-inthanethi . Ukuqinisekisa ikhwalithi yamakhasino esiwabala ku-Casinoble.org sinohlu lokuhlola.
Ikhasino kumele inikezwe ilayisense yiGunya lokuGembula
Ikhasino kufanele kubonakale lilungile ekucwaningweni okuzimele
Ikhasino kufanele isekele imali yendawo
Ikhasino kufanele libe nenhlangano yokuxhasa ukukhuluma isiNgisi
Ikhasino kufanele isekele ukudluliswa kwezintambo zebhange njengenketho yokuhoxa
Ikhasino kufanele libe nesigaba se-Live Casino
Ngezansi kukhona izakhiwo esizibuyekeza kuwo wonke amakhasino esiqala ngawo ukubuyekeza konke
Phila iCaribbean Stud
Phila i-Dragon Tiger
Phila eTexas Holdem
Phila Amakhadi Amathathu Poker
Idiphozithi yokuqala : 100% kuze kube
Ngezansi ungabona amakhasino esiwabukezile kuze kube manje. Sihlala njalo sifuna ama-opharetha amasha ukuze awahlole futhi awabuyekeze futhi uhlu luzoba lude ngokuya phambili. Uma uphuthelwa yikhasino ocabanga ukuthi kufanele ifakwe ohlwini lapha usazise.
Yini i-Online Casino?
I-casino eku-inthanethi iyindawo enezincwadi zezemidlalo, imidlalo yetafula, imishini yama-slot, nemidlalo yokugembula ngogesi kuwebhusayithi. I-casino eku-inthanethi inezici eziningi ezifanayo zekhasino ebukhoma kufaka phakathi imidlalo yomthengisi bukhoma, kepha ingadlalwa ngezinhlelo zokusebenza noma iwebhusayithi ngaphandle kwesidingo sokuhamba. Abadlali bangadlala kunoma iyiphi idivayisi,
Ngibhalisa kanjani kuwebhusayithi yekhasino?
Abadlali bangabhalisa ekhasino eku-inthanethi nganoma yisiphi isikhathi. Ukuphela kokufanele bakwenze ukuya kuwebhusayithi, hlola ikhasi lokubhalisa le-akhawunti, bese ubona ukuthi yini okudingeka bayenze ukuze baqale. Iningi labantu licelwa ukuthi lifake imininingwane yabo yomuntu siqu, imininingwane yabo yezezimali kwifomu lentela, futhi bangasebenzisa ikhadi labo lesikweletu noma i-akhawunti yasebhange ukugcwalisa i-akhawunti yabo ngokheshi. Konke kuncike ekutheni ikhasino ilibeka kanjani ikhasi labo lokubhalisa.
Abantu bangayikhipha nini imali yebhonasi?
Abadlali abakwazi ukukhipha imali yebhonasi ezimweni eziningi ngoba leyo mali yebhonasi akuyona imali yamahhala. Imali yebhonasi yenzelwe ukuthi isetshenziswe kusayithi ukuthola imali. Umuntu ogembule imali yakhe yebhonasi waphinde wawina imali angakhipha imali ayiwinile. Umuntu ongazange agembule imali yakhe yebhonasi akakwazi ukukhipha imali.
Yiziphi izitayela zokuhoxa ezikhona?
Isitayela sokuhoxa kuwo wonke ama-cwebsite sihlukile. Amanye amakhasino azokwenza ukuthi abantu babuyele emuva ngendlela efanayo ababeyikhokha ku-akhawunti yabo, kanti amanye amasayithi azoba nesigaba esikhethekile sokuhoxa esivumela umdlali ukuthi ashintshe i-akhawunti yakhe yokuhoxa. Wonke umdlali kufanele azi ngemithetho ekuleyo webhusayithi ngaphambi kokuzama ukukhipha imali yakhe. Ukuhoxa kungathatha isikhathi esithe xaxa kumasayithi athile kuya ngokuthi bakuphatha kanjani ukuthengiselana kwe-ACH.
Ayini ama-jackpots aqhubekayo?
Ama-jackpots aqhubekayo akhula nsuku zonke njenge-lottery ezweni lasekhaya lomdlali noma ezweni. Umdlali obona i-jackpot eqhubekayo uzobona ukuthi leyo jackpot iyaqhubeka nokukhula, futhi bazoyibona ikhula nsuku zonke kuze kube yilapho othile eyinqoba. Kunezinto ezingahleliwe ezingadala ukuthi umuntu awine i-jackpot, futhi ayikho indlela yokwazi ngokuqinisekile ukuthi ungayinqoba kanjani ngaphandle kwenhlanhla nje.
Yini iphesenti lokukhokha?
Amaphesenti wokukhokha inani lokukhokha uma kuqhathaniswa nenani lediphozi elenziwe amakhasimende. Ikhasino elijwayelekile lizoba nephesenti lokukhokha lama-70%, kepha amakhasino aku-inthanethi azuzisa abadlali ngoba bavame ukuba namaphesenti okukhokha kuma-95% nangaphezulu. Lokhu kusiza abadlali ukwenza imali eningi, futhi abasebenzisanga mali yokuya ekhasino.
Ingabe kunemikhawulo ekubhejeni?
Wonke amakhasino anokubheja okungenani futhi okuphezulu. Abadlali kufanele babeke enye yemali yabo kulo mdlalo ukuze benze inzuzo yekhasino, kepha abakwazi ukubheja kakhulu kangangokuba ikhasino ayikwazi ukubakhokhela. Hlola ubuncane nobukhulu ekhasino ngalinye nakumdlalo ngamunye.
Ihluke kanjani imidlalo yomthengisi bukhoma?
Imidlalo yabathengisi ebukhoma iyahluka ngoba inganikeza umdlali iforamu evulekile yokukhuluma nomthengisi osekhamera. Lena futhi indawo lapho abadlali bengakhuluma khona bodwa ngokufunzwa komsindo. Abadlali emidlalweni yomthengisi bukhoma badlala ngekhono, futhi babheke amakhadi aphathwe ngesikhathi sangempela ngumuntu wangempela.
Yini i-RNG futhi kungani kubalulekile?
I-RNG ingumkhiqizi wenombolo engahleliwe, futhi ubuchwepheshe obusetshenziswa yibo bonke amakhasino aku-inthanethi ukwenza imidlalo yabo ibe nobulungisa ngangokunokwenzeka. Imidlalo kufanele inikeze imiphumela engahleliwe ukuze iqiniseke ukuthi ihambisana nemithetho yabo yokudlala efanelekile. Lezi zinkampani zisebenzisa ama-RNG kuwo wonke umdlalo, futhi yile ndlela abadlali abangaqiniseka ngayo ukuthi kabakhohliswa.
Kungani kufanele abantu badlale online?
Abantu kufanele badlale ku-inthanethi ngoba bavikelwe yiwebhusayithi kanye nekhomishini yokudlala efanelekile. Bangathola ibhonasi enkulu ngokubhalisela isiza, futhi bangaya kunoma iyiphi iwebhusayithi nganoma yisiphi isikhathi ukugembula. Bathola amanani aphezulu okukhokha, futhi bangakhipha imali yabo ngokushesha. Banokukhethwa okukhudlwana kwemidlalo, futhi bangangena ohlelweni lwemiklomelo ngasikhathi sinye.
Yimiphi imivuzo abantu abangayithola ohlelweni lokwethembeka?
Uhlelo lokuthembeka luzonikeza ama-spins amahhala nemali yebhonasi kubadlali abasezingeni eliphansi abebedlala kusayithi isikhashana. Umuntu obesenesikhathi eside esizeni angawina imali yangempela, noma angamenyelwa emiqhudelwaneni ebekelwe abadlali babo abaphambili. Abantu abasezingeni eliphakeme lalezi zinhlelo zemiklomelo bazonikeza amaholide njengengxenye yohlelo lwabo.
Abadlali bangena kanjani ohlelweni lokwethembeka?
Uhlelo lokwethembeka noma i-VIP yinto enikezwa yikhasino kuwo wonke umuntu odlala kusayithi. Lolu uhlelo olunikeza amaphuzu kuyo yonke idiphozi, lunikeza amabhonasi amaningi kubadlali, futhi lubavumele ukuthi bazame imidlalo kuqala. Abantu abaningi bangena kulezi zinhlelo ngokushesha nje lapho bebhalisa, kepha bangafinyelela emazingeni amasha uma basebenzise imali eningi noma isikhathi esizeni.
Yiziphi izindlela zokubhanga?
Abadlali bangasebenzisa ama-akhawunti asebhange ngaphezulu kwe-ACH, futhi bangasebenzisa amakhadi edebithi namakhadi wesikweletu kumasayithi amaningi. Kukhona amakhasino azothatha i-PayPal noma i-Neteller ne-Skrill. Amakhasino ajwayele ukulinganiswa ngenxa yezindlela zawo zokubhanga, yingakho kubalulekile ukuthi abantu abafunda izilinganiso bahlole ngokucophelela ukuthi zingaki izindlela zokubhanga ezikhona.
Abantu bangakhipha imali ngokushesha okungakanani?
Abantu bavame ukukhipha imali ngokushesha lapho sebephumelele imali, kepha abadlali kungadingeka ukuthi balinde ukuthola imali yabo ngenxa yokuthi isayithi lizokuphatha nini lokhu kuthengiselana. Kungaba nesikhathi sokulinda kusayithi, futhi kungahle kube nomkhawulo wokuthi umdlali angakhipha malini ngosuku olulodwa. Hlola zonke lezi zidingo ngaphambi kokugembula futhi unethemba lokuthola imali.
Ingabe abadlali bangakwazi ukulandelela umsebenzi webhange?
Abadlali bangaya ekhasini labo le-akhawunti kumakhasino amaningi aku-inthanethi ukuze babone konke okwenziwayo. Lokhu kuyabasiza ukuthi babone ukuthi imali isetshenziswe kuphi nokuthi ikhishwe nini.
Yini eyenza ukufaka imali kumakhasino aku-inthanethi kuphephe?
Imali emakhasino aku-inthanethi iphephile ngoba isiza sisebenzisa iseva ephephile. Iseva evikelekile ivikela lonke ulwazi kukho konke okwenziwayo.
Ingabe idiphozi iphephile?
Isayithi elinelayisense elisebenzisa iseva evikelekile liphephe ngokuphelele ngoba ubuchwepheshe sebuthuthuke kakhulu.
Ingabe abadlali kufanele balande uhlelo lokusebenza lwekhasino?
Abanye abadlali bangathanda ukudlala kuhlelo lokusebenza, kepha abanye bangathanda ukuba kuwebhusayithi. Izinhlelo zokusebenza zingathatha inkumbulo eningi kakhulu ocingweni, kepha abanye abantu bangase bakhethe ukuba lula kohlelo lokusebenza kudivayisi yabo ngoba ingadlalwa noma kunini.
Ngabe abadlali badinga ifoni yakamuva ukuze bayidlale?
Akunjalo Empeleni. Abadlali abaningi bangadlala kunoma iyiphi idivayisi abayifunayo, kepha ngokujwayelekile bazothola umuzwa ongcono kakhulu uma besebenzisa idivayisi ye-ne’er.
Imaphi amadivayisi anikeza i-Gameplay enhle kakhulu?
Amathebulethi afana ne-iPad ne-Samsung Galaxy angcono kakhulu ku-gameplay, kepha abadlali abaningi bangadlala kunoma iyiphi idivayisi futhi bazijabulise. Konke kuncike ekutheni bafuna ukusebenzisa isikrini esithintwayo nokuthi bangathanda ukuthi isibuko sabo sibe sikhulu kangakanani.
Kufanele ube neminyaka emingaki ukugembula ekhasino eku-inthanethi?
I-18 ngumkhawulo weminyaka emazweni amaningi, futhi iyi-18 kuye ku-21 e-US kuya ngesimo nesayithi. Noma ngubani onemibuzo mayelana nokuthi kumele abe neminyaka emingaki yesiza esithile noma izwe ahlala kulo kufanele ahlole imithetho yendawo ukuqinisekisa ukuthi isebenza ngokusemthethweni.
Yini edingekayo ukuze udlale online?
Abadlali badinga ukuba yiminyaka elungile, futhi badinga ukubhalisela ikhasino eku-inthanethi. Abadlali badinga ukuba nedivayisi ezosebenzisa iwebhusayithi, noma badinga ukuba nedivayisi ezolanda uhlelo lokusebenza lwekhasino. Umdlali udinga ukuba nemali azoyifaka ku-akhawunti yakhe, futhi kumele abe nemali eyengeziwe azoyifaka ku-akhawunti yakhe uma iphela. Kumele futhi bafunde imithetho yomdlalo ngamunye ukuze babone ukuthi yini edingekayo kubo.
Ingabe kunemikhawulo yokuhoxa noma imikhawulo?
Kunemikhawulo yokuhoxa kuwo wonke amakhasino, kepha ahlukile. Amanye amakhasino azoba nemikhawulo yansuku zonke, kanti amanye azoba nomkhawulo wamasonto onke. Abadlali badinga ukujwayela leyo mikhawulo ngoba ingashintsha ukusuka kwenye indawo kuya kwenye. Lokho kusho nokuthi umdlali udinga ukuhlala kuleyo mikhawulo ngoba amakhasino awenzi okuhlukile.
Yimiphi imidlalo esizeni ngasinye?
Yonke ikhasino eku-inthanethi inesivumelwano sayo nezivumelwano ezahlukahlukene nabathuthukisi abenza le midlalo. Abathuthukisi banamabheji abo kuwebhusayithi, futhi benza imidlalo emisha ngaso sonke isikhathi. Le midlalo isukela emidlalweni yetafula eyisisekelo nezikhala zakudala kuya emidlalweni ethuthuke kakhulu enezinkulumo zezindaba nokuningi okuthandwayo. Umdlali angasesha isiza ngasinye ngohlobo, noma angafunda imidlalo ye-catalo gof ukuthola itafula elizohambisana nezinga labo lekhono.
Uyini umdlalo onenzuzo enkulu ekhasino eku-inthanethi?
I-roulette yaseYurophu inezingqinamba ezinhle kakhulu ngoba kune-0 kuphela esondweni, futhi le midlalo ingatholakala kuyo yonke i-Intanethi. Kukhona amanye amakhasino anezikhala ezikhethekile ezinamathuba amahle kakhulu, futhi kukhona amatafula ayisisekelo we-poker noma we-blackjack anganikeza izingqinamba ezinhle. Kodwa-ke, iningi labadlali lizowina imali eningi ngokudlala isitayela se-European roulette.
Uyini ibhonasi yokwamukela?
Ibhonasi eyamukelekile ibhonasi enikezwa abantu ikhasino lapho bebhalisela isiza. Abadlali bangathola ibhonasi ngokubhalisela nje, noma bazothola ibhonasi lapho benza idiphozi yabo yokuqala. Wonke amakhasino ahlukile, futhi angahlinzeka ngemali yebhonasi noma ama-spins wamahhala njengengxenye yebhonasi yabo. Ibhonasi eyamukelekile kungenzeka ingabi idiphozi noma inikelwe ngediphozi yokuqala.
Yini ibhonasi yediphozi?
Ibhonasi yediphozithi ibhonasi enikezwa yikhasino ngokubhalisela nje. Ikhasino linganikela ngale bhonasi ukuzama umdlalo omusha, noma bangayinika wonke umuntu ongena emnyango. Ibhonasi ingaba yimali yebhonasi noma i-spins yamahhala, futhi umdlali akudingeki ukuthi abeke engcupheni noma yini ukuthola ibhonasi. Konke umdlali okumele akwenze ukungena kusayithi bese uchofoza ukuze afune ibhonasi.
Yini imfuneko yokubheja?
Lokhu kuyimigomo yebhonasi. Abadlali kufanele babheje ibhonasi ngaphambi kokuyikhipha, noma kufanele balinde isikhathi esithile ngaphambi kokuba bathathe ibhonasi. Umdlali futhi angahle abe nesikhathi eside kangaka ukusebenzisa imali yabo yebhonasi noma i-spins.
Ngabe amakhasino aqinile abukeka kanjani?
Amakhasino anamandla abukeka njengamakhasino ajwayelekile. Kodwa-ke, abanamalayisense, futhi abantu kudingeka bahlole amalayisense abo ukuze baqiniseke.
Abadlali bazi kanjani ukuthi banomlutha?
Abadlali abayimilutha bazongena ezikweletini, badinga ukugembula nsuku zonke, futhi kufanele bagembule ukuze bazizwe bengcono ngosuku lwabo. Abantu abaphuthelwa umsebenzi noma abanganaki abangane nomndeni ukugembula bavame ukuba nenkinga.
Ngabe abadlali bangaluthola usizo lwenkinga yokugembula?
Yebo. IGamCare ise-UK, kanti i-NCPG itholakala e-US. Zombili lezi zinhlangano zisiza abantu abacabanga ukuthi bangaba nomlutha.
Yini inkohliso yabagembuli?
Yilapho abantu becabanga ukuthi izinto zangaphandle zidlala kwimiphumela yomdlalo. Awukho umthetho wezilinganiso, futhi umdlalo awukwazi ukubikezelwa ezimweni eziningi.
Abantu bangabona kanjani ukuthi ikhasino liphephile?
Isiqalo se-https kufanele sibe kubha yamakheli, futhi umdlali angabheka isitifiketi sesayithi ukuze aqiniseke ukuthi zisemthethweni.
Yini imfuneko yokudlala?
Lokhu kuyefana nemfuneko yokubheja yebhonasi. Abadlali kumele basebenzise amabhonasi ngaphambi kokuphuma kwemali.
Yini iklayenti elingalandwa?
Le nguqulo yekhasino engalandwa kukhompyutha ukuyidlala ngaphandle kokuya kuwebhusayithi.
Ngabe abadlali badinga ukuxhumana ngo-inthanethi?
Abadlali badinga ukuxhumeka okuqinile kwe-inthanethi ukuze badlale kukhompyutha yabo noma kudivayisi kagesi. Umuntu osebenzisa uhlelo lokusebenza imvamisa angadlala amageyimu ngolwazi olutholakala ku-akhawunti yakhe, kepha izinto azikwazi ukubuyekezwa zize zibuyele ku-inthanethi.
Ingabe abantu bangadlala kwi-Mac?
Iningi labantu lingadlala kwi-Mac ngoba wonke la makhasino ahlelelwe ukusebenza kuwo wonke amapulatifomu. Kunezikhathi lapho izinhlelo zokusebenza ezithile zingatholakali kwimikhiqizo ye-Apple, kepha lokho kuyivelakancane elingabangeli izinkinga zabadlali.